Layaabka adduunka, maantana waxaa leesku diiday wiil iyo gabar ilmo adeer ah “Dhacdo Layaab Leh” | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	6:28 pm » Magaalada Kismaayo oo caawa laba qeyb u kala qeybsan (Dagaalo oo xilli kasta la filanaayo) 6:18 pm » Madaxweynaha Puntland oo markale si kulul u weeraray Madaxda Dowladda Soomaaliya 11:56 am » Buuggi Jubbaland baalki ugu dambeeyay maanta ayaa la rogay 11:31 am » Dagaal khasaaro dhaliyay oo maanta Ciidamada Dowladda ku dhex maray Magaalada Muqdisho 10:26 am » WAR DEG DEG: C/naasir Seeraar oo dagaalo ku dhawaaqay iyo xaalada Magaalada Kismaayo oo kacsan 8:54 am » Ciidamada Dowladda Sierra Leone oo ku wajahan Degmooyinka Jilib iyo Bu’aale 8:25 am » Hawlgalo culus oo maanta ka soconaaya Xaafadaha Ceel Qaloow iyo Buulo Xubeey 8:18 am » WAR DEG DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Baydhabo 8:11 am » Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo weeraraaya Degmada Baraawe 7:17 am » Madaxweyne-yaasha Igad oo sheegay inaysan waxba kama jirin Doorashadii Axmed Madoobe By: Mastar // Jun 16 2012 at 2:40 pm // 6,707 Reads // Fanka iyo Suugaanta, Wararka Somalia Layaabka adduunka, maantana waxaa leesku diiday wiil iyo gabar ilmo adeer ah “Dhacdo Layaab Leh” Share Tweet
Dhacdadaan oo mid layaab ah ayaa waxay dhex martay lamaane Somaliyeed oo lagu kala magacaabo lagu Anwar iyo Salma. Anwar ayaa dhacdadaan ka sheekeeyay waxayna ku bilaabaneysaa sidatan:-
Intii aan waxbarashada ku guda jiray, waxaa isfahan iyo kaftan wanaagsan igana dhaxeeyey Salma. Salma waxay aheyd gabar uu dhalay adeerkey, Aniga salma waxaa isla soo qaadanay waqti dheer, xilligaas muusan naga dhaxeenin wax jaceyl ah, balse labadeenuba waxaan aheyn dad isgaad-gaad uun ka dhaxeeyo. Waxaan ladhacay sheekadayda, waxan la-dhacay wanaagaydii faraha badnaa ay aniga i heysay. Xaqiiqdii Salma waxay hanatay qalbigayga oo dhan, taasoo ay ugu wacan tahay wanaagayda faraha badan.
Salma waalidiintii dhalay waxay noqdeen kuwo hadalo xun xun had iyo jeer ku dhihi jiray, iyagoo sheeg sheegi jiray ama igu tilmaami jiray inaan ahay ruux faqiir ah oo aan waxba haysan. Oraah walbo oo ay salma waalidiintayda ku dhahaan waxay aheyd mida mar walba i soo gaarsiin jirtay. Waalidiintii dhalay Salma ayaa waxay ku sasabeen in’ay faraha iga qaado, haddii ay taasi yeeshana loo-diro doono wadamada reer galbeedk. Balse Salma maysan aheyn qof waxaasoo dhan u muuqda, waxa kaliya ee u muuqda waa galkacaylka ay i qabto.
Odayga dhalay Salma ayaa wuxuu ahaa mid yaqaano lacag uun, balse aanan laheyn wanaag iyo tolnimo. Weydhici kartaa in dadka qaar la’isku diido, weliba qaab qabiil, balse aniga maxaa leegu diiday, waxaan ahay wiilkooda, waxan ahay nin ay isku meel kasoo wada jeedaa, waxan ahay nin ay isku dhiig yihiin.
Waxaa dhacday in’ay adeerey u tagaan odayga balse odaygu maaha nin wiji iyo tol yaqaana, waa nin yaqaano uun lacag. Adeeradey ayaa igu dhahay sheeg haddii aad qabto si’aan gabadha kaaga soo ka xayno, haddii aadan qabani ka sabar gabadhaasi.Waxaan u arkay inay tahay xal wanaagsan,welibana waxan u qaatay mid aan ku hanan karo jaceylkayga.
Waxana u sheegay adeeradey inaan qabo Salma, una baahanahay maadaama ay tahay xaaskayga. Adeeradey ayaa igu yiri ninkaan laga yaabo inuu kuugu inkiro gabadha ee keenso warqad cadeyneysa inay xaaskaaga tahay. Waxan u tagay Sheekhii i sameeyey warqadii maherka. Aniga iyo adeeradey ayaa u tagnay odayga Salma dhalay balse waxa uu noogu jawaabay tani waa Copy ee keena warqadii Asalka aheyd (The Original One). Sidii ayaa yeelay midi asalka aheyd inuu i sameeyo ayaa ka codsaday Sheekhii maherka i sameeyey.
Anwar oo ka sheekeynaayey dhacdadii xanuunka badneyd ee qabsatay ayaa intaasi kusoo gaba-gabeeyey. Related News:
Qiso Xanuun badan:Jirkaaga ii hibeey ayuu i dhahay hadaad i jeceshahay ana waan isku dhiibay mana i guursan!!! Baabuur ayaan isla raacnay qacdii koowaad ayaan ku jeclaaday “Waa gabar taariikh ku dhacday” Gabar si xoog ah inta loo watay Muqdisho baabuurna la saartay kadibna Cirbad lasoo duray Xaalad cakirana kusugan!!! Dr Saacid oo ka warbixiyey Safarkiisii Kismaayo iyo Natiijadii kasoo baxday (WARSAXAFADEED) Gabdho aan weli la guursan oo si xooga ah loogu kufsaday Muqdisho Dhacdo Muqdisho Todobaadkii hore laga yaabay:Tuug Xaday Meyd kadibna taariikh ay ka qabsatay!!! Waxaan kusoo Arkay Xarunta Nabad Sugida Muqdisho (Warbixin Kooban) Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments